Apple Arcade wuxuu noqon karaa guuleyste weyn ee Apple ka badan adeegga telefishanka - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA Apple Arcade wuxuu noqon karaa guuleyste weyn ee Apple ka badan adeegga telefishanka - BGR
ka dib rasmi ah adeegga cayaaraha loo yaqaan 'subscription video' ayaa lagu dhawaaqay bishii la soo dhaafay in uu qorsheynayo in uu bilaabo dayrta iyada oo qayb ka ah horumarinta ku salaysan xirmooyinka dakhliga iyo adeegyada, waxaan horey u soo aragnay muuqaalkeena ugu horreeya todobaadkan Macmacaanka Apple waa mid halis ah oo ku saabsan Apple Arcade. Hase yeeshee taariikhda la sii daayo oo aan ahayn fahamka sanadkaan, laakiin waxay u muuqataa in iPhone maktabaddu ay go'aansatay in ay ku qaadato dhowr boqol oo milyan oo doolar oo ka badan ciyaaraha 100, wadarta guud oo ka badan 500 Milyan doolar oo ku saabsan dalabkan ay isticmaalayaashu bixin doonaan lacag bille ah. Marka la barbardhigo, waxay awoodi doonaan inay galaan cayaaro fara badan oo tiknoolajiyadeed, oo ay sameeyaan kuwa horumarineed oo madaxbannaan - cayaaraha oo ay ku jiraan koobab cusub iyo koobab gaar ah.
Wargeyska Apple ayaa iibin doona si aad u bilowdo Apple Arcade, nus bilyan oo doolar ayaa ka timaada warbixinta Financial Times ayaa taas oo muujinaysa sida ay muhiimka u tahay dalabka cusub ee loo yaqaan 'Apple' xitaa inkastoo uu jiro khilaafka ku wareegsan soo iibinta Apple TV +. Tani waa adeegga fiidiyowga ee Netflix oo kor u kaca ah oo shirkaddu ay ku bilaabatay isla munaasabadda warbaahinta ee Cupertino bishii hore.
sida ay FT xiganaya ilo qarsoodi ah oo dhowr chords yaqaan, Apple ay u muuqataa in ay sameeyaan arrin maalgashiga hore ee kulan uu ka samaysan yahay maktabadda Arcade Apple, falanqeeyayaasha ayaa waxa uu xitaa noqon karaa adeeg ah oo balaayiin dollar shirkadda in ay halkan dhowr sano ka hor. Inkastoo awoodda xiddigtii in Apple ayaa la qorsheeyey in lagu qabto adeegidda television ay - oo ay ku jiraan kuwa Oprah Winfrey in Steven Spielberg - falanqeeyayaasha HSBC waxay u maleyneysaa in Apple Arcade wuxuu noqon karaa qof ku guuleysta shirkadda, marka loo eego dakhliga.
Sida laga soo xigtay warbixintan cusub, istiraatiijiyadda Apple waxay u muuqataa inay qayb ahaan u tahay si loo hubiyo in horumariyayaashu leeyihiin lacag ku filan oo ka sarreeya kharashka horumarinta ciyaaraha madaxbanaan. Noocyada sida Disney, Konami, Sega, iyo sidoo kale dukaamo yaryar oo si fiican u soo bandhigay Apple App Store, sida ustwo (oo sameeyay horumarinta ciyaarta Monument Valley ), dhammaantood waxay ka qaybgali lahaayeen Apple Arcade.
Warbixinta FT muujinaysaa in Apple ayaa hore u maray ka billion dollars ku bixisay ilaa hadda for Apple TV +, taas oo si cad u hoos tirooyinka halkan wada hadleen for Apple Arcade. Si kastaba ha ahaatee, falanqeeyayaasha HSBC waxay aaminsan yihiin in Apple ay abuuri doonaan meel u dhow 400 million dakhliga Arcade sanadka soo socda iyo ku dhawaad ​​3 billion (dhab 2,7 billion) by 2022.
Apple TV + ayaa la rajeynayaa in ay soo saarto 2,6 bilyan oo doolar by 2022, sida laga soo xigtay HSBC. Haddii waxaas oo dhan waa run, waxaa laga yaabaa in natiijada caajisnimo la hawlaha - la shows TV, waxaad si cad u eeg in aad isku dejiso, halka ciyaarta kale oo badan oo firfircoon oo hawl yar dadban waa. kala duwan ee ka buuxa Apple Arcade bilawday wakiil imtixaanka ugu horeysay ee dhabta ah, laakiin hadda, waxa ay u muuqataa in Apple waa guusha. Tani waa wax la yaab leh iyadoo la tixgelinayo dareenka la bixiyay ee la xidhiidha shirkadda Netflix.